Madaxweyne Farmaajo iyo wafdigii la socday oo casho sharaf loogu sameeyay madaxtooyadda Kenya (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Farmaajo iyo wafdigii la socday oo casho sharaf loogu sameeyay madaxtooyadda Kenya (SAWIRO)
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenynatta ayaa habeenkii xalay xarunta madaxtooyada Kenya casho sharaf ugu sameeyay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo iyo wafdigii la socday, kuwaas oo gelinkii dambe shalay soo gaaray magaalada Nairobi.
Madaxweyne Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta oo ay wehliyaan madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Kenya William Ruto iyo wasiirka arrimaha dalkaas Aamino Maxamed ayaa dhamaantood si farxad iyo kaftan ku dhameeystay kulankoodii casho sharafta ahayd.
Sidoo kale casho sharaftaasi ayaa waxaa kasoo qeyb-galay madax kale iyo xildhibaano fara badan oo ka tirsan dalkaasi Kenya, iyadoona kooxaha fanka dalkaasi ay goobtaasi kusoo bandhigeen heesho iyo ciyaaro hidaha dhaqanka Kenya.
Safarkaan uu madaxweyne Farmaajo kusoo gaaray magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa noqonaya kiisi labaad uu dalka Soomaaliya uga soo amba-baxo tan iyo markii loo doortay xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya 8-da bisha Febraayo ee sanadkaan.
Madaxweyne Farmaajo ayaa safarkiisa koowaad ku tagay dalka Boqortooyada Sacuudi Carabiya 23-kii bisha Febraayo ee sanadkaan, kadib markii uu casuumaad ka helay boqorka dalkaasi Boqor Salmaan Bin Cabdicasiis Aala Sucuud.
Ugu dambeyntii, madaxweyne Farmaajo ayaa dalka Kenya ku sugnaan doonno muddo seddax maalmood ah, wuxuuna ka qeyb gali doonnaa shir madaxeedka IGAD oo furman doonno maalinta berrito oo ay taariikhda ku beegan yahay 25-ka bishaan Febraayo.